Liverpool oo lumisay saxiixyada laba ciyaaryahan oo Man United halyeeyo ka noqday , waa kuwee?+Sawirro
Tuesday, December 18th, 2018 - 21:49:57
Sunday October 08, 2017 - 20:33:26 in Wararka by Kubad Bile
Qeyb kamid ah buuga dhawaan soo bixi doono ayaa lagu daabacay The Sunday Times. Souness ayaa hadalkiisa ku bilaaway. "Waxaa lumiyay labo ciyaaryahan kuwaas oo noqday halyeeyo Manchester United ah.
"Ron Yeats. Oo ahaa (Madaxii fulinta kooxda Liverpool ee xiligaas" ayaa iisheegay inuu jiro goolhaaye da'yar oo u dhashay Danish-ka(Peter Schmeichel) kaas oo ahaa taageere Liverpool.waxaa uu doonaayay inuu bixiyo safarkiisa iyo Hotel asigo oo mararka qaar kubadalanaayo inuu nala joogyo"
'Waxaan isku dayaayay inaa iska fududeeyo Bruce Grobbelaar.[Inaan iska iibiyo](Kaas oo shabaq-ilaaliye u ahaa Lfc) taasi ayaana cadeenaysa dhibaatada. Waxaana intaa dheeraa inaa lasoo saxiixanay David James. Sidaasi daraadeed waxaan u maleenaayay inaan sameyn karo iyadoo aan haysan ( goolhaye dooqa koowaad oo cusub.
"Eric waxaa uu ahaa mid kale aan lumiyay. Waxaa gurigooda kula ciyaarnay Auxerre.Michel Platini ayaa waxaa uu iigu yimid inaan arko.waxaa uu ii sheegay inuu ciyaaryahan ii hayo.wiil dhibaatoole ah(Dhib badan) balse ciyaaryahan wanaagsan ah. Waxa uu ahaa Cantona. Laakiin waxa ugu dambeeyay aan u baahnaa waxa uu ahaa ciyaaryahaan kale oo dhiblow ah"
'Waxaan haystay 30iyo kabadan.(Ciyaaryahaano) Waxaan isku dayaayay inaan diro. Sidaasi daraadeed uma baahni dhib badan. Waxaan dhahay waxaan raadinayaa wax kale. Sidaasi daraadeed maya. Waad mahadsantahay.
Labada koox ayaa sabtida kulmi doona kulan katirsan horyaalka xilli Liverpool ay wali baadigoob ugu jirto hanashada horyaalka oo ay ugu dambaysay 26 sano ka hor.